Maninona ny fiovana kely amin'ny fampiroboroboana ny varotra CPG dia mety hitondra valiny lehibe | Martech Zone
Maninona ny fiovana kely amin'ny fampiroboroboana ny varotra CPG dia mety hitondra valiny lehibe
Zoma, Aprily 21, 2017 Alahady 23 aprily 2017 Terry Ziegler
Ny sehatry ny fividianana mpanjifa dia sehatra iray ahazoan'ny fampiasam-bola lehibe sy ny fihoaram-pefy avo lenta dia fiovana lehibe amin'ny anaran'ny fahombiazana sy ny tombom-barotra. Ireo goavam-be indostrialy toa an'i Unilever, Coca-Cola, ary Nestle dia nanambara ny fandaminana indray sy ny paikady hanentanana ny fitomboana sy ny fitehirizana ny vidiny, ary ireo mpanamboatra entam-barotra kelikely kosa dia antsoina hoe malaky, mpamaky antoko vaovao miaina fahombiazana lehibe sy fifantohana. Vokatr'izany, ny fampiasam-bola amin'ny paikady fitantanana fidiram-bola izay mety hisy fiatraikany amin'ny fitomboan'ny farany ambany dia atao laharam-pahamehana.
Na aiza na aiza no misy ny fanadihadiana lehibe kokoa noho ny amin'ny varotra varotra izay ahitan'ny orinasan-tsakafo mpanjifa mihoatra ny 20 isanjaton'ny fidiram-bolany raha ny fahitana ny 59 isan-jaton'ny fampiroboroboana tsy mahomby hoy i Nielsen. Ankoatr'izay, ny Ivon-toerana fanatsarana ny fampiroboroboana vinavina:
Ny fahafaham-po manodidina ny fahaiza-mitantana ny fampiroboroboana ny varotra sy ny fanatanterahana amin'ny antsinjarany dia nihena ary 14% sy 19% izao no isan'izy ireo. Tatitra momba ny TPx sy fanatanterahana antsinjarany 2016-17.
Miaraka amin'ny valiny manaitra toy izany, mety hisy ny hiahiahy fa ny marketing amin'ny varotra dia mora tratry ny fiovana manaraka manjo an'ny orinasa CPG, fa ny tena izy dia ny fanatsarana ny fampiroboroboana ny varotra dia tsy tokony hitaky ny fizotran'ny asa goavana, ny olona ary ny fanamboarana vokatra takian'ny fepetra fanatsarana vola hafa. Fa kosa, ny làlana mankany amin'ny fanatsarana ny fampiroboroboana ny varotra dia asiana fiovana kely izay mety hisy fiatraikany lehibe sy maharitra.
Manolora tena amin'ny tsara kokoa
Ao anatin'ny tontolo izay ampanjarian'ny orinasa dolara an-tapitrisany amin'ny fampiroboroboana tsy mahomby, na dia ny fanatsarana isan-jato kely aza dia hanampy be amin'ny farany. Mampalahelo fa fikambanana maro no nanoratra ny fampiroboroboana ny varotra ivelan'ny varotra ho faritra iray ilaina amin'ny fandaniana fa tsy mametraka fanontaniana tsotra fotsiny -
Ahoana raha nanao fanovana iray tamin'ny fampiroboroboana iray tamin'ny mpivarotra iray aho?
Miaraka amin'ny fanampian'ny vahaolana fanatsarana ny fampiroboroboana ny varotra, ny valiny dia minitra vitsy miaraka amin'ny KPI azo vinavinaina azo isaina toa ny tombom-barotra, ny habetsany, ny vola miditra ary ny ROI ho an'ny mpanamboatra sy ny mpivarotra. Ohatra, raha toa ka nihazakazaka tamin'ny fampiroboroboana ny 2 ny vidiny A ho an'ny $ 5, inona no ho vokany raha toa ka natao tamin'ny 2 ho an'ny $ 6 ity fampiroboroboana ity? Ny fahaizana mampihatra mialoha Analytics ny famoronana trano famakiam-boky amin'ireto scenario "what-if" ireto miaraka amin'ny valiny voatrisa dia manafoana ny vinavinan'ny drafitra fampiroboroboana fa kosa manararaotra ny fahitana stratejika hikajiana valiny BETTER.
Aza mandray valiny hoe "Tsy haiko"
Nahomby ve ity fampiroboroboana ity? Nisy vokany ve io fampiroboroboana io? Hifanaraka amin'ny tetibola ve ity drafitry ny mpanjifa ity?
Ireto dia fanontaniana vitsivitsy fotsiny izay iadian'ny orinasan-tsakafo mpanjifa mahita ny valiny noho ny angona tsy feno, tsy marina na tsy takatra. Na izany aza, hetsika aorinan'ny fotoana sy azo antoka Analytics dia vato fehizoron'ny fanapaha-kevitra amin'ny alàlan'ny angona izay mitarika ny paikady fampiroboroboana ny varotra.
Mba hahatratrarana izany dia tsy maintsy esorin'ireo fikambanana ireo takelaka manara-penitra matetika a fitaovana amin'ny fanangonana sy famakafakana angona. Fa kosa, ny fikambanana dia mila mijery vahaolana fanatsarana ny fampiroboroboana varotra izay manome ivon-toerana manan-tsaina manome kinova tokana amin'ny fahamarinana raha ny fahitana sary an-tsaina sy ny fanaovana kajy ny ROI fampiroboroboana ny varotra. Miaraka amin'izany, hampifantoka ny sainy ny orinasa amin'ny fikarohana vaovao mba handinihana mavitrika ny zava-bita sy ny fironana hanatsarana ny vokatra. Ny fitenenana, tsy azonao atao ny manamboatra izay tsy hitanao, tsy marina ihany raha resaka fampiroboroboana ny varotra no ilaina, fa lafo ihany koa.
Tadidio fa an'ny tena manokana
Iray amin'ireo sakana lehibe indrindra amin'ny fanatsarana ny varotra varotra ny ady amin'ny toy izany foana no nataontsika toe-tsaina. Na ny fiovana kely indrindra amin'ny fizotran'ny anaran'ny fanatsarana aza dia mety ho sarotra ary handrahona mihitsy aza rehefa tsy mifanaraka tsara amin'ny tanjon'ny fandaminana sy ny tanjon'ny tena manokana. Ao amin'ny Torolàlana momba ny tsena ho an'ny fitantanana fampiroboroboana ny varotra sy ny fanatsarana ny indostrian'ny entan'ny mpanjifa, Mpanadihady momba an'i Gartner, Ellen Eichorn sy Stephen E. Smith, dia nanoro hevitra hoe:
Miomàna amin'ny fitantanana fanovana mila ezaka lehibe. Amporisiho ireo fihetsika tianao hampiharina amin'ny alàlan'ny famolavolana fanentanana sy dingana, izay mety ho ampahany lehibe indrindra amin'ny fampiharana anao.
Amin'ny lafiny iray, dia mety ho toa tsy dia manintona ny milaza fa ny fanatanterahana ny vahaolana fanatsarana ny fampiroboroboana varotra dia fiovana kely. Na izany aza, tsy toy ny fampiasam-bola teknolojia hafa, fampiharana sy fahitana tombony azo avy amin'ny a Fanatsarana ny fampiroboroboana ny varotra Ny vahaolana (TPO) dia tokony hitranga ao anatin'ny 8-12 herinandro. Ankoatr'izay, amin'ny natiora, ny vahaolana TPO dia manan-danja ihany noho ny fahaizan'ny fikambanana mandrefy sy maharitra ny vokany ary manafoana ny fampiasam-bola imbetsaka.
Ny tena maha samy hafa raha ny fanatsarana ny fampiroboroboana ny varotra, izay manasaraka azy amin'ny fandraisana andraikitra ataon'ny orinasa hafa, dia tsy ny hitondra zava-baovao, fa ny fampiasam-bola amin'ny tsaratsara kokoa. Fisondrotana tsara kokoa, fomba fanao tsara kokoa, vokatra tsara kokoa.
Tags: coca ColaCPGFampiroboroboana ny varotra CPGNestleNielsenIvon-toerana fanatsarana ny fampiroboroboanavahaolana tpoFanatsarana ny fitantanana varotraFampiroboroboana ny varotra varotraFanatsarana ny fampiroboroboana ny varotraUnilever
Terry Ziegler dia CEO sy mpiara-manorina ny Vahaolana T-Pro. Miaraka amin'ny traikefa fitantanana entana (CPG) maherin'ny 30 taona eo amin'ny sehatry ny varotra varotra, marketing ho an'ny mpanjifa, fitantanana sokajy, varotra ary fitantanam-bola amin'ny fitarihana sy andraikitra amin'ny fitantanana ao amin'ny RJR / Nabisco, Borden Foods, Dairy Farmers of America, Synectics Group ary AFS Technologies; Terry dia manambatra fampiharana vaovao miaraka amin'ny fitarihana azo ampiharina.